Hoggaamiyayaasha Afrika iyo Baaqyada Nabadeed ee ku aadan Itoobiya | Berberanews.com
Home WARARKA Hoggaamiyayaasha Afrika iyo Baaqyada Nabadeed ee ku aadan Itoobiya
Hoggaamiyayaasha Afrika iyo Baaqyada Nabadeed ee ku aadan Itoobiya
Afrika-(Berberanews)-Hogaamiyayaasha qaaradda Afrika ayaa isku dayaya inay ku qanciyaan dowladda Itoobiya inay aqbasho in la bilaabo geedi socod dhexdhexadin ah oo lagu soo afjarayo colaadda gobolka Tigrey.
Hogaamiyaashan ayaa sheegay in loo baahan yahay in laga hortago in dagaalka uu ku sii fido guud ahaan gobolka.
Madaxwaynaha dalka Ugandan, Yoweri Museveni, ayaa wadahadalo la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya Demeke Mekonnen iyo madaxwaynihii hore ee Nigeria , Olusegun Obasanjo, oo isagu u yimid si geedi socodka uu ugu biiro.
Madaxwaynaha dalka Kenya Uhuru Kenya aya sidoo klae codkiisa ku biirayay baaqyada ku aadan in si qaab nabadeed lagu xaliyo dagaalka dalka Itoobiya ka socda.
Balse dowladda Itoobiya ayaa ku adkeysanaysa in howlgalka lagu soo ceelinayo sharciga uu sii socon doono.
Waxaa sidoo kale uu rai’sul wasaare Abey ku gacan seyray baaqyada ku aadan in wadaxaajood lagu xaliyo dagaalka.
Muuqaal laga soo duubay caasimadda Tigrey ee, Mekelle, ayaa muujinaya qiiq ka baxaya dhowr dhismo, waxyar uun ka dib markii ay dulmareen diyaaradaha dagalka ee Itoobiya,
Boqollaal qof ayaa ku dhintay dagaaladan u dhaxeeya dowladda fedaraalka ee Itoobiya iyo xoogagga Tigrey .
Dhanka kale waxaa sii kordhaya tiradda dadka ka qaxaya dagaalada ka socda dalka Itoobiya.
Laascaanood (Berberanews) Wararka naga soo gaadhaya magaalada Laascaanood, ee xarunta gobolka Sool, ayaa sheegaya in goor dhaweyd lagu diley ALLE, ha u naxariistee mid ka mid ah garsoorayaasha maxkamadda degmada Laascaanood .
Waxaa dilkan gaystay dad aan haybtooda aan ilaa hadda la aqoonsan.
Xilligii dilku dhacay waxaa uu marxuunku ku sii jeedey hoygii uu ka degenaa magaaalada Laascaanood, ee xarunta gobolka Sool.
Ciidamada amaanka ayaa ku hawlan soo qabashada ciddi dilka geysatay.
Wixii warar ah ee ka soo kordha wararkayagaa danbe ayaanu idiinku soo gudbim doona hadii ILLAAHEY yidhaaho.
Joe Biden oo magacaabay sagaal xubnood
Washington-(Berberanews)-Madaxweynaha la doortay Joe Biden ayaa Salaasadii ku dhawaaqay shaqaalaynta sagaal sarkaal oo sarsare oo ka tirsan Aqalka Cad, oo ay ku jiraan kuwii aad ugu dhowaa ololihiisii ​​guusha.
Inkastoo Trump uu sii wado hawl-qabadkiisii ​​caadiga ahaa isla markaana uu si been ah u sheeganayo inuu ku guulaystay doorashadii dhacday November 3.
Biden ayaa sidoo kale loo qorsheeyay inuu ka helo warbixin amniga qaranka khubarada ka baxsan dowlada, iyadoo la ogyahay in Trump uu ka hor istaagay xisbiga Dimuqraadiga inuu helo xogaha maamulka.
Trump wax munaasabad ah kama hadal jadwalkiisa guud, maadaama uu inta badan ka maqnaado aragtida dadweynaha isla markaana uu qoro cabashooyinka ku saabsan doorashada.
Previous articleAbaal-marinta Nobel price Ma lagala noqon karaa qof hore loo siiyey?
Next article“Waxaanu daacad ka nahay in wakhtiyada adag aanu kala dabaalano Somaliland” Taiwan